OGE EBERE Archives - Okwu ugbu a
Oge Emebere Emechiri?
Ihe na March 18, 2021 March 18, 2021 by Mark
Nwere “oge obi ebere mechiri”, dika ekwuru n’izu gara aga n’ime ozi nke Eluigwe? Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị ka nke a pụtara?Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Nna nke Obi Ebere
Ihe na February 12, 2021 February 15, 2021 by Mark
Enwere m ọ pleasureụ nke ikwu okwu n'akụkụ Fr. Seraphim Michalenko, MIC na California na ụka ole na ole ihe dị ka afọ asatọ gara aga. N’oge anyị n’ime ụgbọ ala, Fr. Seraphim gwara m na ọ dị oge diary nke St Faustina nọ n'ihe egwu nke ịbụ nke a ga-egbochi kpamkpam n'ihi ntụgharị asụsụ na-adịghị mma. Otú ọ dị, ọ banyere, dozie nsụgharị ahụ, nke mere ka e nwee ike ịgbasa ihe odide ya. O mechara bụrụ osote onye isi akwụkwọ maka itinye akwụkwọ ya.
Ebe Mgbaba Maka Oge Anyị
Ihe na April 16, 2020 February 9, 2021 by Mark
THE Nnukwu Oke Ifufe dị ka ajọ ifufe nke gbasaala na mmadu niile agaghị akwụsị rue mgbe ọ gwụchara njedebe ya: ịdị ọcha nke ụwa. Dika odi otua, n’oge Noa, Chineke n’enye ihe ụgbọ ka ndị Ya wee chebe ha ma chekwaa “ndị fọdụụrụ” ha. Iji ịhụnanya na ngwa ngwa, a na m arịọ ndị na - agụ akwụkwọ m ka ha ghara igbu oge ọ bụla ma bido ịmalite ịrịgo steepụ ahụ n'ime ebe mgbaba Chineke nyere…Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Nwanyị anyị: Kwadebe - Nkebi nke Abụọ
Ihe na April 1, 2020 April 2, 2020 by Mark
Mbilite n'ọnwụ nke Lazarọs, fresco si na San Giorgio ụka, Milan, Italy
EGO na- akwa mmiri nke Churchka ga-agafe na ya Mmeri nke Nwanyị Anyị. Mana nke a apụtaghị na ndị nkịtị ga-arụ ọrụ dị obere n’oge na-abịa n’ihu, ọkachasị mgbe ịdọchara aka na ntị.Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Ihe na March 30, 2020 April 2, 2020 by Mark
OGWU, M ga-ekwu ya.
Have maghị otú o si sie ike ide ihe niile a ga-ekwu na obere oghere! Ana m agbalị ike m niile ịghara ịtụfu gị ma n'otu oge ahụ na-anwa ikwesị ntụkwasị obi n'okwu ndị ahụ na-ere ọkụ n'obi m. Maka ihe ka n'ọnụ ọgụgụ, ị ghọtara otú oge ndị a dịruru mkpa. Do naghị emepe ihe odide ndị a ma rie ude, “Ego ole ka m ga-agụ ugbu a? ” (N'agbanyeghị nke ahụ, ana m eme ike m niile iji mee ka ihe niile dịrị.) Onye nduzi mmụọ m kwuru n'oge na-adịbeghị anya, "Ndị na - agụ akwụkwọ gị tụkwasịrị gị obi, Mark. Ma ikwesiri ịtụkwasị ha obi. ” Nke ahụ bụ oge dị oke mkpa nye m n'ihi na ọ dịla anya m chere na ọ bụ nnukwu esemokwu a enwe iji dee gị, mana achọghị iribiga ókè. N'aka ozo, enwere m olile anya na inwere ike ijide! (Ugbu a ị nwere ike ịnọ naanị gị, ịnwere oge karịa mgbe ọ bụla, nri?)
Nwanyị anyị: Kwadebe - Nkebi nke Mbụ
Ihe na March 28, 2020 March 29, 2020 by Mark
NDỊ a n'ehihie, agbalịrị m maka oge mbụ mgbe mpụrụ iche izu abụọ iji gaa nkwupụta. M banyere chọọchị n’azụ onye na-eto eto ụkọchukwu, bụ́ ohu kwesịrị ntụkwasị obi, nke raara onwe ya nye. Enweghi m ike ịbanye na nkwupụta ahụ, egburu m ikpere na ebe a na-eme mgbanwe, edozie na "mmekọrịta mmadụ na ibe ya". Mụ na papa m lere onye ọ bụla anya jụụ, ma m lere anya n'thelọikwuu ahụ…. N'oge nkwuputa m, Apụghị m ịkwụsị ịkwa ákwá. Na-enweghị ebe obibi site na Jizọs; ụmụ mgbei sitere n'aka ndị nchụàjà na persona Christie… mana karia nke a, enwerem ike ihu nke ndi nne anyi di aso ịhụnanya miri emi na nchegbu maka ndi nchu aja ya na Pope.Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Ihe na March 26, 2020 March 27, 2020 by Mark
Ọ B. Ebe a! Ihe ohuru ohuru nke enyere gi aka ichota ozi nke igwe n’elu oge ndi a: CountdowntotheKingdom.com Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Sachapụ di na nwunye…
Ihe na March 23, 2020 March 24, 2020 by Mark
THE ifufe nke oké ifufe nwere ike ibibi-ma ha nwekwara ike ịmịchasị ma sachapụ. Ọbụna ugbu a, anyị na-ahụ etu Nna si eji mmeghe mbụ nke a Nnukwu Oke Ifufe na sachaa, sachaa, na kwadebe Nwunye Anyi Christ for Ọbịbịa ya ibi na ichi n'ime ya n'uzo ohuru. Dika ihe mgbu nke mbu na-amalite ime nkwekọrịta, ugbua, edemede amalitela ma nkpuru obi amalitela iche ozo banyere nzube nke ndu na uzo ha. Ugbua, Olu Onye Ọzụzụ Atụrụ Ọma, na-akpọku atụrụ Ya furu efu, ka a na-anụ n’igwe ikuku…Gaa n'ihu Ọgụgụ →